Ingwijikhwebu ngemiphumela kaTshatha
UKHATHIDE "Tshatha" Ngobe obuye watholakala ukuthi akanalo igciwane leCorona Isithombe:ESIGCINIWE
CHARLES KHUZWAYO | May 27, 2020
ISIMO sesizobuyela kwesijwayelekile oKhozini FM emuva kokutholakala kwemiphumela emisha ngempilo yomsakazi walesi siteshi uKhathide "Tshathugodo" Ngobe. Inhlangano yezokusakaza kuleli iSABC ikhiphe isitatimende idalula ukuthi sekunengwijikhwephu ngemiphumela kaTshatha. Okhulumela iSABC, uMmoni Seapolelo, uthe bekungesilo iqiniso ukuthi uTshatha uneCorona kodwa kube yiphutha lalapho kuhlolwe khona lo msakazi.
"Ukuqinisekiswa kwemiphumela yokutholakala kwegciwane kubikwe izolo, ngenxa yemiphumela esemthethweni enikezwe umsebenzi. Umsebenzi usazisiwe yi-lab ebimhlola ukuthi kunephutha elenzekile ngesikhathi kuhlolwa okokuqala futhi umsebenzi usenikeziwe imiphumela emisha, eqinisekisa ukuthi akanalo igciwane."
UMmoni uthe lenhlangano yezokusakaza ikuqinisekisile ukuthi sebenayo imiphumela futhi bakwenze konke ukulandela imithetho yangaphakathi. "Lolu daba lube nomthelela ongemuhle enhlanganweni, kubalwa ukuvalwa kwamahhovisi aseThekwini nokuthi kunabanye abasebenzi okudingeke bayohlolwa. Ihhovisi lizoqala ukusebenza njengokujwayelekile ngoKwesihlanu lwangoMeyi 29," kusho uMmoni.
Uphethe ngokuncoma imiyalezo yoxhaso neyenkuthazo etholwe nguTshatha ngesikhathi ethola imiphumela ethi unegciwane.